DIINTA DADKU U DARSADO WAA AKHLAAQDA – Sumcadda Islaamka
DIINTA DADKU U DARSADO WAA AKHLAAQDA
Qaran burburka iyo qaab darada soomaalida ku dhacday maaha mid diin ay ka tageen oga timid,waayo soomaalida waxay ka mid tahay umadaha ugu diin raacidda badan dunida,hadana tafaaruq iyo nidaam soo celin la’aan iyo faqri iyo colaad iyo abaar baa tunka loo suray muddo rubuc qarni ka badan.
Kaliya micnaha diin ka taggu waxa uu soomaalida ku rumoobi karaa haddii loo jeedo diinta ay ka tageen midda akhlaaqda iyo dhaqanka suuban oo lafteeda diin ah.
Waayo akhlaaqdu waa ta ugu muhiimsan qofka diinkiisa,sida dhowridda nafta,dhowridda maalka,dhowridda caqliga,dhowridda ballanta,cadaaladda,cafiska,isu tanasulka,istixgalinta,ilaalinta amaanada,caro yarida,runta,ka fogsanshaha beenta,jacaylka,ka dheeraanta nacaybka,ka fogaanta xasadka iyo xiqdiga,wax is tarka,sabirka,dulqaadka,dad wadnimada,dulmi diidnimada,dabacsanaanta,turidda iyo dhimrinta,ka fogaanta afxumada iyo cayda, ka dheeraanta qabyaaladda iyo qaybsanaanta,uxagalinta wanaaga oo dhan iyo ka dheeraanta xumaanta oo dhan.
Intaan waa qaybaha diinta ee inagu yar hadaan soomaali nahay,ilaa aan intaan ku sifownana waxaan sii ahaan doonnaa sida aan hadda nahay iyo ka daran. Salaadaha iyo soonku waxba inama tari doonaan haddaan intaan lagu darin.
Waayo intaan waa inta dunida ku badbaadisa xitaa dad aan muslim ahayn.
GURMASHADA ABAARAHA WAA GUDASHADA WAAJIB DIINI AH.
WADAADADA IYO DIINTA